पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना - Music Our Choice
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना
एम.ओ.सी.	 On Mar 3, 2020
काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको मंगलबार ज्ञानेन्द्रले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन्।
ज्ञानेन्द्रको सन्देश बोकेर उनका पूर्वप्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज गएका हुन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन १५ गते पार्टीको वाग्मती प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘म केही दिनमै मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्दै छु। पाँच दिन अस्पताल बस्छु। छैटौं दिनदेखि घर फर्किएर फेरि काममा लाग्नेछु।’
ओलीको स्वास्थ्य रिपोर्ट आइतबार बालुवाटार पठाइएको वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.अरुण सायमीले बताए। ‘सबै रिपोर्ट आजै (आइतबार) पठाइएको छ। प्रत्यारोपण गर्न सकिने अवस्था छ’, उनले भने। उनका अनुसार प्रत्यारोपणमा विदेशी चिकित्सकसमेत संलग्न हुने सम्भावना छ। ‘विदेशी विज्ञ पनि ल्याउने सम्बन्धमा डा. दिव्यासिंह शाहले नै समन्वय गर्नुभएको छ’, उनले भने।